Voina tamin'ny hain-trano :: Hofotoran'ny polisy ny havan'ireo efa-mianaka niara-maty • AoRaha
Voina tamin’ny hain-trano Hofotoran’ny polisy ny havan’ireo efa-mianaka niara-maty
Andrasana ho tonga eny amin’ny biraon’ny polisy na hampanantsoina ny fianakavian’ireo olona efa-mianaka niara-maty tamin’ny hain-trano, teny Andavamba Anatihazo, tamin’ny alin’ny alahady 9 aogositra lasa teo. “Hatao famotorana izy ireo”, hoy ny polisy.
Fantatra taorian’ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana fa afon-dabozia no nitarika ny firehetan’ny tranohazo nisy an’ity fianakaviana kely ity. Renim-pianakaviana sy ny zanany dimy mianadahy no tao an-trano. Niara-kilan’ny afo tao ny efa-mianaka. Naratra ny zazalahikely, efa-taona. Nieren-doza kosa ny zazakely iray.
«Tsy mbola voamarina ny momba ny hoe nisy nanafika sy nodorana velona tao ireo olona ireo. Afo tao an-trano no nahatonga ny loza. Tsy maintsy hohenoina ny olona akaiky an’ireo namoy ny ainy», araka ny fanampim-panazava avy amin’ny polisy.
Asa ratsy tany Toamasina :: Nogadraina ilay miaramila tratra nanendaka